FESOJ oo wariyayaal tababar Khadka Internetka u qabatay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. FESOJ oo wariyayaal tababar Khadka Internetka u qabatay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By MM on 17th April 2021
25 wariye oo xubno ka ah isutagga saxafiyiinta Soomaliyeed ee FESOJ ayaa maanta 17April tababar uga furmay Khadka intrnetka ayagoo kala jooga magaalooyinka iyo degmooyinka dawlad goboleedyada dalka iyo Muqisho.
Tababarkan oo maanta iyo berri soconaya waxa maalgaliyay xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ( United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM ) waxaana uu ku saabsan yahay kor u qaadista aqoonta iyo bedqabka Suxufiyiinta ee ku aadan COVID-19 iyo u doodista soo saarista tallaalka COVAX ee COVID-19 Soomaaliya, labada maalmood ee tababarka waxaa casharada bixinaya Saxafiyiin waaya arag ah iyo dhakhtar caafimaad.
Tababarayaasha waxay si gaar ah diirada u saareen mawduucyada mabaadi’da la xiriirta Anshaxa iyo Xirfadda Saxaafadda, tebinta saxda ah, warka been abuurka ee laga samaynayo xaaladaha xasaasiga ee la xiriira talaalka COVID-19.
Dhamaadka Casharada waxay wariyayaasha su’aalo mawduuca ku saabsan iyo saamaynta COVID-19 ku yeeshey shaqadooda la wadaageen tababarayaasha, kuwaasoo la wada falanqeeyay.